के नेपालमा टिक्नै सकिन्न ? यसरी सकिन्छ कि ?
“हुन्न हो दाइ, यस्तो सिस्ट्म नै नभएको ठाउँमा कसरी हुन्छ? अस्ति एउटा गर्भवती महिला बच्चा जन्माउन सरकारी हस्पिटल गइन, त्यहाँ भर्ना लिएन। प्राइभेटमा जानको लागि उनिसंग पैसा रहेनछ, बच्चा जन्माउन नसकेर मरिन। यत्रो घटना घट्यो, न्युज आयो तर कोहि जिम्मेवार छैन। कसैलाइ कार्बाही हुन्न। समाचार आयो, सकियो। यस्तो न्युनतम मानवीय संबेदना नै नभएको देशलाइ के मेरो देश भनेर बस्नु? के देश मै बसौं, केही गरौं भन्नू यार?”
“सामान्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष करोडौंका गाडी चढेर हिड्छ्न जब कि त्यो गाउपालिकाको बिकास बजेट नै केही करोड मात्रको हुन्छ। यसरी कसरी हुन्छ यार? तपाइँ हामिले केही गरिएछ अलि अलि कमाइएछ भने पनि, यो सारा देखेर कुनै दिन झुण्डिएर मर्न मन लाग्यो भने? त्यसैले दाइ, म यहाँ मर्न चाहन्न। बरु बिदेश नै पलायन हुन्छु। हिम्मत गरौं, देशमै गरौँ, नभन यार दाइ मलाइ । काम नै छैन यहाँ ।”
“दुबई रहुन्जेल बिजि भइन्थ्यो, अलि अलि सुनेपनी यस्ता सबै न्युज सुनिन्थेन। यहाँ त फेड अप हुने रैछ यार। देश सुध्रीन्न के, नेताहरुलाइ स्वर्गै छ, तिनका चम्चेहरु पनि रहलपहल खाएर बाचेकै छन…। अरे दाइ, हुन्न के मैले केपि, प्रचण्ड, देउवा अनि तिनका उत्तराधिकारी इस्वर, योगेश, बर्षमानहरुले गरेनन भनेर हुन्न भनी राको छैन के। तिनिहरु त खराब भए, भए । त्यसपछिको छ नि तेस्रो, जुन हाम्रो जेनेरेसन भनौं । तिनिहरु झन खत्तम छन के दाइ । म आएको १३ दिन मै पागल भैसके यार।”
यहाँ आएको ६ साल सम्म हाइ/हेलो नगर्नेहरुले पनि आउदै रैछस एउटा मोबाइल त गिफ्ट हान्लास नि भन्छन। कोहिले ल्यापटप भन्छन। कसम सर मैले झुट बोलेको होइन। मोबाइल र ल्यापटपको डिमाण्ड मात्र ३१ पुग्यो।
यी माथिका ३ प्याराग्राफहरु दुबईबाट हालै मात्र नेपाल गएको एक युवाले मसंग गरेको भोइस मेसेजका अंश हुन। दुबईमा राम्रै कम्पनीमा, राम्रै पोजिसनमा काम गरेर महिनाको नेपाली रुपिया २ लाखसम्म कमाउने यो २७ बर्षिय जवान, मसंगको सल्लाहमा नेपालमै केही गर्ने, यो बेला हामिले केही गरेर रोजगारीहरु सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हुँदा-खाँदाको जागिर छोडेर नेपाल गएको थियो।
संगै काम गर्ने सके धेरै नसके आफू बाहेक कम्तिमा अरु ८-१० जनालाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने र उर्जावान उमेर र देश- बिदेसबाट आर्जन गरेको अनुभवलाइ देशमै लगानी गर्ने भनेर २ लाख महिनाको आम्दानी हुने जागिर छोडेर गएको साथी, नेपाल गएको २ हप्ता पनि नपुग्दै यसरि निराश भए पछि मैले उस्लाइ राम्रै गरि सम्झाएँ । र, एर्को एक जना २४ बर्षिय युवा साथि जो नेपालमै छन, उनिसंग देशको बस्तुस्थिति बारे सोधेँ। अर्को साथिको जवाफ यस्तो थियो।
“यो यार, बिष्णु सर, यहाँ लास्ट गारो छ, अहिले त झन कोभिडको कारणले आम मान्छेहरु पनि दानव भएका छन। सबै तिर भय र तनावमात्र छ। परिवारको सदस्य कोभिड भएर अस्पतालमा छ भने उस्को परिवारलाइ वरिपरिको समाजले गर्ने व्यबहारले त झन मन खिन्न हुन्छ यार। छि:छि र दुर:दुर गर्छन, सामान्य मानवता पनि देखाउदैनन। अस्ति मात्र यहि रुपन्देहीमा बुवालाइ कोभिड लागेर अस्पतालमा भर्ना गरेको परिवारको एक सदस्य स्थानीय पसलमा नुन किन्न जादा गाँउलेले नुन किन्न दिएनन र त्यहाँबाट लखेटे। अन्तिममा उनले पुरै अनुहार छोपेर रात परेपछि ५ कि.मि. पर पुगेर एक पोका नुन किनेर ल्याए। यस्तोमा कसरी हुन्छ, यार? तपाईंको राम्रो ‘जब’ थियो त बेकारमा किन आउन लाग्नु भएको? मलाई तपाई यहाँ टिक्नुहोला जस्तो लाग्दैन सर, अझै पनि सोच्नुस।”
दोस्रो साथिको कुरा सुनेपछी मेरो तेस्रो साथी (२९ बर्षिय) जो कोभिडको कारण जागिर गुमाएर घर जाने तरखरमा छ, उस्लाइ सोधें- के छ स्थिती? कहिले जाने हो घर? त्यसपछी उस्ले धारा प्रवाह भोइस मेसेज गर्न लाग्यो । जुन यस प्रकार थियो।
“अरे सर, म त नेपाल जाम कि नजाम भा’को छु यार। यतै जागिर खोजेर बसम कि जस्तो लागिराछ। कतै जागिर पाएँ भने कसम म जुनिभर नेपाल जांन्न…। अरे कसरी जानू यार, सबैलाइ थाहा छ, म मेरो कम्पनी बन्द भएर नेपाल जान ला’को। बल्ल बल्ल कम्पनीले टिकट सम्म दे’को छ। तर मेरा आफन्त र साथीभाइको डिमाण्डले नै थिँचिएर मर्ने भएँ यार म त। यहाँ आएको ६ साल सम्म हाइ/हेलो नगर्नेहरुले पनि आउदै रैछस एउटा मोबाइल त गिफ्ट हान्लास नि भन्छन। कोहिले ल्यापटप भन्छन। कसम सर मैले झुट बोलेको होइन। मोबाइल र ल्यापटपको डिमाण्ड मात्र ३१ पुग्यो। अरु घडी, लाइट, पावर ब्यांक, इयर पोर्ड आदिको त कुरै नगर्नुस सम्झेर नि सकिन्न…।”
देशका प्रधानमन्त्रीले दुइ छाक खानकै लागि काम गर्नु पर्दैन । सरकारले बिस्तारामै पुर्याइदिन्छ भन्दै गरेको भिडियो सम्झिएँ । सङगै सम्झिएँ, सुर्यबहादुर तामाङ जो कैयौं दिन खान नपाएर राजधानी कै बिच सडकमा मृत लडेको दृश्य । सरकारी क्वारेन्टाइनमा जिबनजल नपाएर मरेका राजु सदा भाइको तस्बिर पनि यसैबेला मानस्पटलमा आयो। यस्ता हजारौं कुरा एकैपटक मस्किष्कमा आउदा साच्चै मस्तिष्क बिस्फोट होला जस्तो हुनेरहेछ।
“हैन यार, नेपालका मान्छेलाइ के लाग्छ यहाँ पैसाको रुख छ? यहाँ मोबाइल र ल्यापटप टिप्न पाइन्छ? कसम यार, नेपालीहरु अरुलाइ लुट्न बाहेक अरु कुनै कुरामा आफ्नो ध्यान नै लगाउन्न। के गर्ने होला यार, त्यहाँ गएर? नेता उस्तै, जनता उस्तै। म त अब गएर २-४ महिना पछि बरु साउदी ट्राइ गर्छु यार। म नेपालमा बसेंभने धेरै समय बाँच्न सक्छु जस्तो लाग्न छोडिसक्यो मलाइ ।”
उल्लेखित तीन जना साथीहरुसंगको बार्तालापमा मैले उनिहरुलाइ राम्रै गरि सम्झाएँ। बर्तमान बस्तुस्थिती, मानव सभ्यताको बिकासक्रम देखि लिएर बर्तमान विश्व ब्यबस्था सम्मका उदाहरण दिएर उनिहरुको मनलाइ त केही समयको लागि शान्त पारिदिएँ । तर, उल्लेखित सबै घटनाक्रमसंग म पहिले नै परिचित भएको भए पनि, सबै एकैपटक सम्झिदा मलाई साच्चिकै असह्य पीडा भयो ।
अनि देशका प्रधानमन्त्रीले दुइ छाक खानकै लागि काम गर्नु पर्दैन । सरकारले बिस्तारामै पुर्याइदिन्छ भन्दै गरेको भिडियो सम्झिएँ । सङगै सम्झिएँ, सुर्यबहादुर तामाङ जो कैयौं दिन खान नपाएर राजधानी कै बिच सडकमा मृत लडेको दृश्य । सरकारी क्वारेन्टाइनमा जिबनजल नपाएर मरेका राजु सदा भाइको तस्बिर पनि यसैबेला मानस्पटलमा आयो। यस्ता हजारौं कुरा एकैपटक मस्किष्कमा आउदा साच्चै मस्तिष्क बिस्फोट होला जस्तो हुनेरहेछ।
केही महिना अघि देशको सिमाना भित्र छिर्न महिनौं सिमानामा रोइकराइ गरेका नौजवान जो बल्लतल्ल देश पसेको महिना दिन मै भोकले सताएपछि पुन: लर्को लागेर भारत छिर्दै छन। खाँडी देशमा हजारौंको संख्यामा युवाहरु यता न उता भएका छन। बिचराहरु दूतावासमा फोन गर्छन, फोन उठ्दैन। साउदिमा त दूतावास मै आन्दोलन गर्न पनि पुगे फेरि पनि सरकारलाइ उनिहरुको न चिन्ता छ न त सरोकार।
इतिहास मै सबैभन्दा पहिले यो स्विकार गरौं कि नेपाली समाज लोभि, भ्रष्ट र ढोंगीहरुको जमघट हो। जबसम्म हामिले यो सत्य स्विकार गर्दैनौं, तबसम्म हामी सुध्रिन संभब नै छैन। रामबहादुर र हरिबहादुर पुरै गलत तर ‘म’ बिष्णुबहादुर चै दुधले नै नुहाएको, महान मान्छे भन्ने चै हुँदै हुँदैन। यस समाजका अवयब हामी सबैमा छन।
तर उता सरकारका मान्छेहरुलाइ भने यहि महामारी दशैं सरह भएको छ। प्लेन भाडादेखि, होटेल क्वारेन्टाइन हुँदै पिसिआर सम्ममा कमिसनको खेलले बिचौलिया, कालोबजारी र कमिसनखोरलाइ पोस्न क्याबिनेट मन्त्री नै लागेका छन र उनिहरुलाइ प्रधानमन्त्री कै सिधा आशिर्वाद छ। रुलिङ्ग पार्टी आपसी भागबन्डाबाट बाहिर आउनै सकेकै छैन। प्रतिपक्षी दल कुन दुलामा छ, सायद कमैलाइ पत्तो होला।
यसको मतलब उल्लेखित साथिहरुले भने झै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हरेक कोणबाट देशको अबस्था भयावह छ।
एक, इतिहास मै सबैभन्दा पहिले यो स्विकार गरौं कि नेपाली समाज लोभि, भ्रष्ट र ढोंगीहरुको जमघट हो। जबसम्म हामिले यो सत्य स्विकार गर्दैनौं, तबसम्म हामी सुध्रिन संभब नै छैन। रामबहादुर र हरिबहादुर पुरै गलत तर ‘म’ बिष्णुबहादुर चै दुधले नै नुहाएको, महान मान्छे भन्ने चै हुँदै हुँदैन। अलिकती कमबढी हुन सक्ला । तर, यस समाजका अवयब हामी सबैमा छन। त्यसैले हामि कहाँ हुने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक सबै घटनाहरुमाथी प्रश्न उठाउँदै गर्दा ब्यक्तिगत रुपमा ‘म’ पनि आफुलाइ सुधार्दै वा अपडेट गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा नभुलौँ। हामी सबैले आजैबाट फरक ढंगले सोंच्न र व्यबहार गर्न जरुरी छ।
४ कोठे घरको लागि नौजवानहरु पुरै जिन्दगी बिदेशमा बिताउन बाध्य हुन्छन। त्यसैले यो शहर, घडेरी र घर भन्ने कुरा जब सम्म हामिले भुल्दैनौं तबसम्म हामी कामदारको कामदार नै हुन्छौं । चाहे युरोप, अमेरिका छिरौँ वा खांडी कुनै फरक पर्दैन। त्यसैले यो शहर र शहरमा घर घडेरीको रहर पुर्णतः त्याग गरौं।
दुइ, एउटा भनाइ छ, “जहाँ कंगाल, त्यहीँ चण्डाल”। हामिकहाँ पनि भएको यहि हो। व्यापक अशिक्षा छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ। कतिबेला के पर्छ कसैलाइ थाहा छैन। सारमा भन्नू पर्दा सबैको मनमा भबिस्यको भय व्यापक छ। र, त्यही भयको कारण आफ्नो आर्थिक, राजनैतिक वा सामाजिक भबिस्यको सुरक्षार्थ मानिस जस्तो सुकै अपराधमा संलग्न हुन हिचकिचाहट मान्दैन।
तीन, नेपाल यतिसम्म बिग्रीएको नै सचेत र योग्य जनशक्ती बाहिरिएर हो भन्ने कुरा कहिले नभुलौँ। र, जबसम्म हामी हरेस खाएर भाग्छौं तब सम्म हावादारी गफ दिने र जनता झुक्काउनेहरुले हामीमाथी शासन गरिनै राख्नेछन। यदि भोलि हामी देशमा रहेनौं र कुनै पश्चिमा देशमै सेटल भएर बसेछौँ भने पनि अस्ति एक ३० बर्षिय गर्भवती चेलिले जे भोगिन त्यहिं वा त्यस्तै पिडां भोलि हाम्रा बुवाआमा, भाइबहिनी आदिले भोगेको त्यही वा त्यस्तै प्रकारका पींडा सात समुन्द्रपारिबाट टुलुटुलु हेर्नू बाहेक हामीसंग अरु बिकल्प हुने नै छैन।
त्यसो भए के गर्ने ?
एक, यति हेक्का राखौं कि अनुभव आर्जन गर्न, सिक्न वा घुम्न बिदेश जान सकिन्छ तर सकेसम्म देशको नागरिकता नै त्यागेर बिदेशीनु कसैको पनि रहर हुनु हुँदैन । र, रहर वा बाध्यताबस कुनै सम्पन्न पश्चिमा देशमा बसाइँ सरेका नेपाली संग पनि बुझौं । उनिहरु पनि चौपट्टै खुसी छैनन।
दुई, आज पनि खर्बौँको व्यापार घाटामा छ देश किनकी हामीकहाँ उत्पादन छैन। अब सरकारले गरेन वा गर्न सहयोग गरेन वा काम गर्न खोज्दा ब्यबधान नै सिर्जना गर्यो भने पनि हामिले आफुलाइ रोक्नै हुदैन।दिनभरी सडकमा भारतीय बिस्तारवाद भनेर कुर्लिने क्रान्तिकारिले साँझ घरमा गएर उतैबाट आएको आलु, साग, र चामल खाने स्थितीको अन्त्य गर्न उत्पादनमा हामिले हात हाल्नै पर्छ। कृषि देखि उद्योग वा सेवासम्मको ब्यबसाय राम्रो बजारको अध्ययन गरेर सुरु गरौं जे पनि चल्छ। सुरुमै आज बिदेसमा कमाइएको जती नकमाइएला तर केही पक्कै पनि कमाइन्छ र पाल्न र पालिन सकिन्छ।
तीन, आज पनि जापान वा अन्य देशमा हेरौं, ८० बर्षकि आमा हुन वा ९० बर्षका बुवा करेसाबारिमा केही न केही गरिराखेका हुन्छन। मतलब उनिहरुलाइ उत्पादनसंग लगाब छ। तर, हाम्रा १८ देखि ६० बर्षसम्मका अधिकांस पहिला या पुरुषले आफ्नो अमुल्य समय टिकटोक, पब्जी देखि लिएर तास वा भट्टी हुँदै अरुको कुरा काट्नमा बिताइरहेका छन। यस प्रकारका अनुत्पादक कार्यमा अनावश्यक समय लगानी गर्न आजैबाट छोडौं।
गिद्दको आयु २०० बर्षको हुन्छ। तर पहिलो १०० बर्ष पुग्दै गर्दा उस्को पखेटा, ठुँड र नङ्ग्रा यति बृद्द र कमजोर हुन्छ कि उसले राम्रो संग उड्न र सिकार गर्न नै नसक्ने स्थिति आउँछ। तब उसंग भोकै मर्ने वा अर्को १०० बर्ष बाँच्नको लागि आफ्ना पुराना ठुँंड, पखेटा र नङ्ग्रा फ्याक्ने दुई वटा बिकल्प मात्र बाँकी रहन्छन। र, अन्ततः गिद्दले दोस्रो बिकल्प रोज्छ र सबै भन्दा पहिले ढुंगोमा बजारेर आफ्नो पुरानो ठुँड रक्ताम्य बनाउँछ। त्यसपछी त्यही ठुँडले कोट्टाएर पुराना नंङ्ग्रा र प्वाँख पनि निकालेर उ पुर्णतः रक्ताम्य हुन्छ। कैयौं दिन भोकै बस्छ र अन्ततः उसमा नयाँ प्वाँख, ठुँड र नङ्ग्रा पलाउछ र फेरि उ जवान गिद्द भएर अर्को १०० बर्षको यात्रामा निस्किन्छ।
चार, आफू खाँडिमा आउदा भर्खर बिहे गरेकी श्रीमतीलाई शहरमा कोठा खोजेर राख्ने त हामिनै हौँ नि। गाउँका पाखावारि र खेत बाँझो राख्नमा त हाम्रै हात छ नि। अब शहरको कोठामा एक्लै बस्ने जवान युवती टिकटोकमा उफृने, भिडियो च्याटमा झुण्डिने नगरेर के करेसामा साग रोप्छिन? के गलबन्दी वा टोपी बुनेर बेच्छिन? अबस्य पनि उनी केही गर्दिनन। महिनै पिच्छे पैसा आएकै छ अनि सबै किनेर पाइएकै छ। किन दु:ख गर्छिन उनी? बरु शहरमै जग्गा जोड्न र महल बनाउने नयाँ सपनाहरु पलाउन थाल्छन र त्यही ४ कोठे घरको लागि नौजवानहरु पुरै जिन्दगी बिदेशमा बिताउन बाध्य हुन्छन। त्यसैले यो शहर, घडेरी र घर भन्ने कुरा जब सम्म हामिले भुल्दैनौं तबसम्म हामी कामदारको कामदार नै हुन्छौं । चाहे युरोप, अमेरिका छिरौँ वा खांडी कुनै फरक पर्दैन। त्यसैले यो शहर र शहरमा घर घडेरीको रहर पुर्णतः त्याग गरौं।
“एकपटक चिनमा एउटा खैरे इसाई धर्मको प्रचार गर्ने क्रममा एउटा उद्योगमा पुगेछ। सबै काममा ब्यस्त। मालिक पनि काम नै गर्दैरैछ। यतिकैमा खैरेले मालिकलाइ सोधेछ- “के तिमीलाई जिससबारे थाहा छ?” काममा ब्यस्त चिनियाँले उस्को मुखमा पनि नहेरी भनेछ- “मलाइ थाहा त छैन तर स्याम्पल छोडी जाउ एक हप्तामा तिम्रो जिसस तयार हुन्छ।” उल्लेखित चार कुरामा सुधार आउने बित्तिकै हामी चिनियाँ जस्तो जे पनि उत्पादन गर्न सक्ने त भइहाल्ने छैनौं तर यसले हाम्रो उत्पादनमा रक्तसंचार भने अबस्य सुरु हुनेछ। खेतबारी हरिया हुनेछन। घर घरमै साना ठुला उत्पादनहरु बन्ने छन। र, ती उत्पादनहरु संकलन गरि बजारीकरण हुनेछ।
हामी नेपाल मै छौं या बिदेशबाट नेपाल जादैछौं भने अब आफ्नो रुचि, क्षमता र आबस्यकता अनुसारको क्षेत्रमा आफ्नो समय, अनुभव र रकम लगानी गरौं । कहाँ के उत्पादन/सेवा आबस्यक छ त्यसको जानकारी स्थानीय सरकारहरुबाट प्राप्त गरि काम गर्दा सफल हुने संभावना सामान्य भन्दा अझै बढी नै रहन्छ।
एक जना गुरुले भन्नू हुन्थ्यो- “गिद्दको आयु २०० बर्षको हुन्छ। तर पहिलो १०० बर्ष पुग्दै गर्दा उस्को पखेटा, ठुँड र नङ्ग्रा यति बृद्द र कमजोर हुन्छ कि उसले राम्रो संग उड्न र सिकार गर्न नै नसक्ने स्थिति आउँछ। तब उसंग भोकै मर्ने वा अर्को १०० बर्ष बाँच्नको लागि आफ्ना पुराना ठुँंड, पखेटा र नङ्ग्रा फ्याक्ने दुई वटा बिकल्प मात्र बाँकी रहन्छन। र, अन्ततः गिद्दले दोस्रो बिकल्प रोज्छ र सबै भन्दा पहिले ढुंगोमा बजारेर आफ्नो पुरानो ठुँड रक्ताम्य बनाउँछ। त्यसपछी त्यही ठुँडले कोट्टाएर पुराना नंङ्ग्रा र प्वाँख पनि निकालेर उ पुर्णतः रक्ताम्य हुन्छ। कैयौं दिन भोकै बस्छ र अन्ततः उसमा नयाँ प्वाँख, ठुँड र नङ्ग्रा पलाउछ र फेरि उ जवान गिद्द भएर अर्को १०० बर्षको यात्रामा निस्किन्छ।” आज हामि पनि त्यही गिद्द बन्नु छ, हाम्रा पुराना आनिबानी र सोंच बदल्न पक्कै पनि सजिलो छैन तर हामी एउटा स्वर्णिम युगमा प्रबेश गर्ने हो भने आफ्नो सोंचलाइ बदलेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुको बिकल्प हामीसंग छँदै छैंन।
कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुन: नियुक्तिको माग गर्दै काठमाण्डौमा पर्दशन
विश्वकर्मा पूजाको दिन (भोलि) देखि सवारी साधन सञ्चालन गर्न व्यवसायी तयार